XOG CUSUB: MD Farmaajo oo soo saaray Amar Xoogan oo saameynaya Wasiiro uu kamid yahay Yuusuf Garaad | Baahin -News, Sports, Views, Entertainment, War On Terror, Health and Social Affairs
XOG CUSUB: MD Farmaajo oo soo saaray Amar Xoogan oo saameynaya Wasiiro uu kamid yahay Yuusuf Garaad
Jun 13, 2017 - jawaab
Madaxtooyadda Soomaaliya ayaa soo saartay amar lagu yareynayo safarada badan ee ay sameynayaan xubno katirsan golaha wasiirada dowladda Soomaaliya.
Sida ay sheegayaan Warar lagu kalsoon yahay, Madaxweynaha dalka Maxamed C/llahi Farmaajo ayaa amray in hoos loo dhigo safarada dibadda ay ku aadaan wasiiro uu kamid yahay Wasiirka Arrimaha Dibadda Somalia Yuusuf Garaad.
Wararka ayaa sheegaya in Madaxweynaha uu go’aankaasi qaatay kadib markii La-taliyayaashiisa ay u gudbiyeen dhaliilaha dhanka Safarada.
Xogta ayaa sheegeysa in Madaxweynaha oo ka duulaya Safarada badan ee dowladiisa uu hoos u dhac ku sameeyay Safarada Wasiir Garaad iyo dhowr Wasiir oo kale oo uu kamid yahay Wasiirka Amniga.
Madaxweynaha ayaa Wasiirada ku amray inay yareeyan Safarada xad dhaafka ah, waxa uuna taa bedelkeeda usoo jeediyay inay ku mashquulan howlahooda gudaha, iyadoo la raacaayo ballanqaadka ay DF u sameysay shacabka.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Somalia ayaa sii wadankara Safaradiisa balse waxaa la faray inuu xakameeyo tirada badan.
Wasiirka Amniga iyo kan Gaashaandhiga ayaa sidoo kale laga mamnuucay Seddex meelood hal meel Safarada ay ku gaari jireen dalka dibaddiisa, waxaana xusid mudan iney yahiin Wasiiradda ugu safarka badan dowladda
<p>Talaabadani ayaa kusoo beegmeysa xili Madaxweynaha dalka uu horay u ballanqaaday inuu yaraan doono Safarada ay gali doonto dowladiisa.